Golaha Wasiirada oo yeeshay Shir Nooc cusub ah oo lagu cambareeyay Inqilaabkii Farmaajo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Golaha Wasiirada oo yeeshay Shir Nooc cusub ah oo lagu cambareeyay Inqilaabkii Farmaajo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Golaha Wasiirada oo yeeshay Shir Nooc cusub ah oo lagu cambareeyay Inqilaabkii Farmaajo
Golaha Wasiirada xukuumadda Xilgaarsiinta ayaa xilli habeen ah shir yeeshay caawa iyadoo uu guddoomiyey Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Shirkan ayaa lagu cambaareeyay isku daygii Afgambi ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Xarunta Golaha Wasiirradda ee uu ku kacay Maxamed C/llaahi Farmaajo, laguna taageeray Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee ku saabsan doorashooyinka.
Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale ka mahad celiyay taageerada Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha caalamka ee Xukuumadda iyo hoggaaminta Ra’iisul Wasaaraha ee arrimaha doorashooyinka.
Waxaa la isku raacay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo kuwii ku lugta lahaa duullaankii lagu qaaday hey’adaha dastuuriga ee dalka, isagoo Ra’iisul Wasaaruhu uu soo magacaabi dooni guddi ka kooban 5 xubnood oo baaris dhameystiran ku sameeya sidii ay wax u dhaceen.
Previous articleDagaal ka socda Magaalada Beledweyne iyo Wararkii ugu danbeeyay…
Next articleMaleeshiyo lagu qabtay Dagaalkii Beledweyne iyo War uu soo saaray Maamulka Gobolka Hiiraan